I-Raw PRL-8-53 powder (51352-87-5) hplc =98% | Yenza ama-SARMS powder
/ Imikhiqizo / I-SARMS / PRL-8-53 powder
SKU: 51352-87-5. Isigaba: I-SARMS
I-AASraw inokukwazi ukuhlanganisa nokukhiqiza kusuka ku-gram kuya kwe-mass order ye-PRL-8-53-powder (51352-87-5), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-PRL-8-53 powder (igama lekhemikhali i-Methyl 3- (2- (benzyl (methyl) amino) ethyl) benzoate) yinkimbinkimbi ye-nootropic etholakala ku-1972 futhi enelungelo lobunikazi ku-1975 ngasekupheleni kukaDkt Nikolaus Hansl, i-neuropharmacologist e-Creighton University e-Omaha, e-Nebraska.
Ama-Raw PRL-8-53 amaqanda ayisisekelo
Formula Yamamolekhula: C18H22ClNO2
I-Melt Point: I-149-152 ℃
Umbala: Iphodini elimhlophe noma elimhlophe
I-PRL-8-53 powder ephuthumayo ekuthuthukiseni ukusebenza kobuchopho nokuthuthukiswa okwengeziwe
I-2. Ukusetshenziswa okukhulu kwe-PRL-8-53 powder:
Ukufundwa komuntu kuphela ku-PRL-8-53 powder kusekelwe ekungeneni komthamo owodwa we-5 mg. Ayikho idatha ekusebenzeni kahle noma enobungozi obukhona kunoma yimuphi omunye umthamo kubantu.
Isexwayiso ku-Raw PRL-8-53 ewusizo
Ngokusho kobuchopho, i-PRL-8-53 powder ibonakala i-dopamine agonist. Lokhu kusho ukuthi kungathuthukisa i-dopamine receptors futhi ngokuvamile isetshenziswa iziguli zikaParkinson. Kubantu abangasidingi lesi sici, kungaba yingxenye engadingeki ye-PRL-8-53 i-powder eluhlaza.
Ucwaningo lwezinyosi emantongeni lubonisa umlinganiso ophakeme kakhulu ngezinga le-LD50, kodwa ubufakazi obucacile buyadingeka. Futhi, kubonakala sengathi umphumela we-PRL-8-53 uyingozi ekunciphiseni umsebenzi we-motor ngaphakathi kwengqondo.
Mechanism Action Action ye-PRL-8-53
Indlela yokwenza lokhu ku-nootropic engaziwa okwamanje kodwa ingase ibe ingxenye yamakhomikhali. UDkt. Hansl, umdali we-compound uxoxa ngephephandaba leP Phi Delta Kappan ukuthi i-PRL-8-53 powder ikhulisa ubuchopho impendulo ku-acetylcholine, futhi leli qembu aliyona into evuselelayo. Ilungelo lobunikazi be-PRL-8-53 okukhulunywa ngayo nge-powder okukhulunywa nge-cholinergic.
Ukuhlolwa kwesilwane okubandakanya amagundane kubonisa ukuthi i-4mg / KG yenyuka i-apomorphine (i-dopamine agonist) yanda i-gnawing ephoqelelwe ngamagundane, ephakamisa ukuthi i-PRL-8-53 i-powder eluhlaza ngokwezinga elithile i-dopamine agonist. Isifundo esifanayo saphawula ukuthuthukiswa kokufunda ukugwema isimo. Le i-nootropic ayikhulisi izenzo ze-amphetamine kumazintambo futhi azibonakali zivimbela umsebenzi we-MAO.Isifundo esisodwa kubantu sisho ngokufutshane ukuthi i-PRL-8-53 i-powder eluhlaza ikwazi ukukhululwa i-dopamine futhi ibangela ukuvinjelwa okuyingxenye ye-serotonin.
Izinzuzo ze-PRL-8-53 powder emifushane:
Ukutadisha okukodwa okushicilelwe i-PRL-8-53 powder kubonisa ukuthuthukiswa okuncane kokuthola igama ngesikhathi sokusebenza ngekhanda. Ababambiqhaza banikezwe i-5mg yamahora angu-PRL-8-53 amahora angu-2 ngaphambi kokuvivinywa bese becelwa ukuba balalele ukurekhoda kwamazwi we-12 ngokulandelana okunye futhi abatshele ngesikhathi esilandelayo (ngokushesha ngemva kokuvivinywa, usuku olulandelayo no-4 emva kwezinsuku). Izinzuzo ezincane zitholakale ukuthola ukuthola okusheshayo, kepha kuthuthukiswe okungaphezulu kuka-80% abantu abahlolwe ngokuhamba kwesikhathi ukuthi ngubani oqale wahola kabi ukuhlolwa (amagama ka-6 / 12 ngokunembile noma ngezansi).
(2) Izinzuzo ezingashicilelwe (ezibonakalayo) ezingenzeka - I-Geometric Pattern Exercise
Ngokuthakazelisayo, umdali wekhamera uphinde axoxe nezinye izilingo ezibonakala zingatholakali noma zingashicilelwa. KuMagazini oshicilelwe ku-1978, uDkt. Hansl ukhuluma ukuthi i-PRL-8-53 powder izibalo ezithuthukisiwe ekuzivocavoca kwephethini ye-geometri. Abahlanganyeli baboniswe uchungechunge lwamaphethini weJomethri bese becela ukuwadweba ememori, ukuthuthukiswa kwezibalo kwaqashelwa.
(3) Ukuzivocavoca kwamaqondo e-Arithmetic
Kulesi sihloko esifanayo, uDkt. Hansl ukhuluma ngokuzivocavoca kwenombolo lapho abathintekayo bekhipha khona i-7, engeza i-1, susa i-7, engeza i-2 nokunye kuze kube yilapho inombolo "yomgomo" ifinyelelwe. Izikhathi ezincane kuya kwinombolo "yomgomo" ziphawulwe eqenjini le-PRL-8-53 eluhlaza okwesibhakabhaka.
(I-4) Ukuhlolwa kwe-Verbal Fluency
UDkt. Hansl uxoxa ngokuhlolwa lapho izihloko zacelwa ukuba zenze amagama avela ochungechungeni lwezinhlamvu namachashazi. Isibonelo "i-UR" kwakufanele iphendulwe noma yiliphi igama ngokufaka izinhlamvu ekuqaleni nasekupheleni kwegama, ngenkathi kufakwa amachashazi ngencwadi. "UR" ingaba "okwamanje" njengesibonelo. Ukuthuthukiswa okuphawulekayo kwatholakala kubathintekayo ababethathile izidakamizwa.
I-PRL-8-53 ye-Powder Marketing
Ungathenga kanjani i-PRL-8-53 powder kusuka ku-AASraw
I-PRL-8-53 Amaphoseshi Angadliwa Amapayipi: